निन्द्रा नलागे बिधान अधिवेसनमा जाऔँ, निन्द्रा लागे आलोचना सुनौँ !
‘पूर्व माओवादीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आयो’ : प्रचण्डडा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि निमन्त्रणा दिनुपर्‍यो नि त ! एमालेको विधान महाधिवेशन शुरु, मुख्य मञ्चमा देखिएन पुष्पलाल, मदन र मनमोहनको तस्वीरओलीको ठुलो
नेपाली ‘चे ग्वेभारा’ अर्थात् ‘रुदाने’ फिलिममा !
आफ्नो ज्यान बँचाउन मान्छेले जीवनमा थुप्रै कर्म गर्नुपर्छ । तर, कसैकसैलाई एउटै कर्मले जीवनपछि पनि ‘जीवित’ राख्दछ । चलचित्र ‘रुदाने’ टीमले त्यस्तै सुन्दर काम गरेको छ जसले उहाँहरुलाईजीवनपछि पनि जनमानसले
७ मिनेटमै सकियो प्रतिनिधिसभा, केहीले सांसदले खोक्न भ्याए, केही हाच्छ्युँ गर्दै निस्किए !
‘एमालेलाई संसदमा आउन लाज हुनुपर्ने हो’ : बाबुराम भट्टराईलाज मानेर पनि कहीँ तेस्रो पटक संसद विघटन गर्न सकिन्छ त ! सात मिनेटमा नै सकियो प्रतिनिधिसभा बैठक : केही सांसद पुग्न
समय आएपछि बोल्नु ठीक कि आवस्यक भएको बेला बोल्नु ठीक ?
एन्टिजेन परीक्षणकै २५ सय शुल्क लिने सुमेरु हस्पिटल कारबाहीमानिजी अस्पतालमा भनेकै बढी पैसा लिनका लागि खोलिएको हो, सस्तो खोज्ने भए सरकारी अस्पातलमा जाओ न ! भोट माग्न कसरी जाने होला
गगनको प्रश्न : ‘विधि न सिधी मिवलेन्द्र निधि ?’
कानून मिचेर औषधिको मूल्यवृद्धि, महानिर्देशकले अनुचित लाभ लिएको आशंकामान्छेको जीवनको पो मुल्य तोक्न मिल्दैन त, औषधिको त जति राखे नि भयो नि ! नेतृत्वलाई गगनको प्रश्न : ‘कहिल्यै विधिमा चल्नु
सत्तारुढ नेताहरुबारे ओलीको टिप्पणी : यिनीहरुका छातीभित्र मुटु होइन, दर्शनढुंगा रहेछत्यसो भए ढुकढुकी सुन्ने प्रयास नगरौँ, टाउको फुट्ला ! राष्ट्रपतिबाट बजेट प्रमाणीकरण, सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्योसरकारलाई आफ्नोलागि खर्छ गर्ने
‘भौजु, नमस्कार !’‘नमस्कार ! अन्त, भाइलाई चिन्नु सकिनँ नि !’‘म मनोज गजुरेल बोल्दैछु भौजु, कमेडी च्याम्पियनको ।’‘ल्या…सर पो बोलेको रहेछ ! यहाँ विकीको बाबासँग बात मार्नु लो !’‘एकछिन तपाईंसँगै बात
‘सभामुखले प्रचण्डको इशारामा काम गरे’ : गोकुल बास्कोटाओलीबाट अरुलाई आफ्नो इशारा अनुसार काम गराउने ज्ञान पनि सिकेछन् प्रचण्डले ! बोर्डको चेतावनी : ‘मर्यादा विपरीत काम गर्ने विद्यार्थीको सबै परीक्षा रद्द
मित्रराष्ट्र वा विकास आयोजनामाथि टिप्पणी गरेको आधारमा कारबाही नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश“के गर्ने सर ? माथिबाट आएको आदेश हो, मान्नै पर्‍यो !” ‘प्रदेश १ र बागमतीमा हाम्रो सरकार बन्छ, स्वागत
सरकारले दिएको मोडल कि मेडल !
‘एमालेको नाम सुनेरै जनताले नाक खुम्च्याउने भइसके’ : माधव नेपालअनि एकीकृत समाजवादीको नाम सुन्ने बित्तिकै जनताले आँखीभौं उठाउने भैसके ! ‘संविधान नबनेको भए नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने खतरा थियो’ :